ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ၏ယုံကြည်မှုကောင်းစွာလူသိများသည်, သင်မူကားဘုရားမဲ့ဝါဒီအဖြစ်တာသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်မုဒိန်းသမားထက်နည်းနည်းပိုပြီးအဖြစ် distrusted ကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခဲ့တာလဲ တရားမဝင်နှင့်သိက္ခာမဲ့သောအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်တစ်ခုပုံကျပန်းလူတစ်ဦးနှင့်အတူတင်ပြတဲ့အခါ, လူအနည်းငယ်ကတစ်ဦးအဖြစ်လူတစ်ဦးကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည် ခရစ်ယာန် ပိုပြီးမွတ်စလင်အဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်, နှင့်အများဆုံးတစ်ဦးအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည် ဘုရားမဲ့ဝါဒီ ။
ဤရွေ့ကား Will အမ်ပြုသုတေသနရလဒ်များဖြစ်ကြောင်း
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ် ( "ဘုရားမဲ့ဝါဒီအတွက်ခင်ဗျားယုံသလားသံသယများဆန့်ကျင်ဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီတစ်ဖက်သတ်အစွဲမှဗဟို Is") အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Gervais, Azim အက်ဖ် Shariff နှင့် Ara Norenzayan ။ သူတို့အနေနဲ့ယုံကြည်ထားသည်ဟုလူတစ်ဦး၏ဤဖော်ပြချက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှ 105 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများစစ်တမ်းကောက်ယူ:
ရစ်ချတ် 31 နှစ်သမီးအရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့အလုပ်လုပ်သူ၏လမ်းတွင်သူသည်မတော်တဆတစ်ရပ်ထားဗန်သို့သူ့ကားကျောထောက်နောက်ခံ။ လမ်းသွားလမ်းလာကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသောကြောင့်, သူသည်မိမိကားကိုထွက်ရတယ်။ သူကသူ့အာမခံသတင်းအချက်အလက်ရေးချဖို့ဟန်ဆောင်။ ထို့နောက်သူသည်သူ့ကားသို့ပြန်ရတဲ့နှင့်ဝေးကားမောင်းရှေ့တော်၌ထိုဗင်ရဲ့ပြတင်းပေါက်သို့အလွတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင်ထိုနေ့, ရစ်ချတ်ဟာလမ်းဘေးအပေါ်တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူကပိုက်ဆံအိတ်ထဲကပိုက်ဆံအားလုံးယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်သူတစ်ဦးအမှိုက်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ပိုက်ဆံအိတ်ပစ်ချ၏။
ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှစ်ဦးကိုအမှုအရာ (စသည်တို့ကိုဆရာနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မြင်းစီးသူရဲ, ဆရာမများနှင့်ဂီတပညာရှင်, ဆရာမများနှင့် skier) ထက် (ဆရာကဲ့သို့) ရုံတစျခုအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြဲပိုပြီးင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ္တိနည်းအညာဘက်အဖြေကိုအစဉ်အမြဲ "ဆရာမ" ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့သော်လည်း, ဒီလွဲချော်နှင့်အခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူအဖွဲ့ဗလာ "ဆရာမ" တံဆိပ်။
ကမှားယှငျးစှာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစရိုက်များအကြားတစ်ဦးတွဲဖက်ဖန်တီးသောကွောငျ့ဤသည်ကို "တွဲဖက်အမှား" ဟုခေါ်သည်။ ပြည်သူ့ကြောင့်တွဲဖက်၏ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှကြွလာသောအခါသူတို့၏အစွဲနှင့်ယူဆချက်မျက်နှာပြင်မှထမြောက်ဖို့ခွင့်ပြုသည့် "ဆရာ" ကအာရုံခံရဖို့ပုံရသည်။
သင်သိက္ခာမဲ့လူတစ်ဦးကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရုံဆရာထက် biker နှင့်ဆရာတကြောင်းထင်လျှင်ဒါ, ဒီ biker ဆန့်ကျင်လိုမုန်းထားဖော်ပြသည်။ ဒါဟာသင်ရုံမဆိုအဟောင်းဆရာဒါသိက္ခာမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်မိပါဘူးသူကပြောပါတယ် - သင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြုမူစတင်ရန်ဖြစ်ပေါ်စေမယ့် "biker" ဖြစ်ခြင်းအတူပါလာမှယူဆသောကဆက်ပြောသည် attribute တွေကြာ unethical ။
ခရစ်ယာန်များသည် & မွတ်စလင်များ
ခရစ်ယာန်, မွတ်စလင်, အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း, ဘုရားမဲ့ဝါဒီ: အဆိုပါသုတေသီများကလူလေးအုပ်စုများနှင့်အတူတွဲဖက်အမှားကျူးလွန်ပုံကိုမကြာခဏနှိုင်းယှဉ်ဖို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်:
အရှင်ဘုရား & ခရစ်ယာန်: 4%
အရှင်ဘုရား & မွတ်စလင်: 15%
အရှင်ဘုရား & အဓမ္မပြုကျင့်: 46%
အရှင်ဘုရား & ဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီ: 48%
ရစ်ချတ်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ထင်သူတွေကိုအရေအတွက်တော်တော်သေးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘယ်လောက်ဘုံပေးထားသျောဤစကားမှန်ဖြစ်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသောတွဲဖက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာနည်းပညာပိုင်းနေဆဲမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖွင့်ပေမယ့်တစ်ဦးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူများ၏ 80% အချို့သောအုပ်စုသည်အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုလျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုတချို့ကျပန်းလူတစ်ဦးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်။
ငါကောင်းမကောင်းတစ်ခုခု, လုပ်နေတယ်ဆရာတွေ့မြင်လျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့ non-ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်းထက်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။
ရစ်ချတ်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ကြောင်းစဉ်းစားရန်ငြင်းဆန်လူတွေကခရစ်ယာန်တွေဟာဖြစ်နိုင်သည်သိက္ခာမဲ့သောအရာတို့ကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်သောစိတ်စွန်းကွက်ပေါ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့အကြံပြုပေလိမ့်မည်။ ဤသည် Non-ခရစ်ယာန်တွေဟာခရစ်ယာန်တွေဟာထက်လျော့နည်းကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ကြပြီးကြောင်းမဟုတ်သောလူဖြူလူဖြူထက်လျော့နည်းကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားထက်မပိုကောင်းမယ့်သောစိတ်စွန်းကွက်၏တစ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါကဆဲမျှမျှတတသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုခဲ့တာဝမ်းသာတယ်သော်လည်းဒါဟာလူတွေသိက္ခာမဲ့အပြုအမူမွတ်စလင်များကပြုမိခဲ့စဉ်းစားရန်သုံးကြိမ်ထက်ပိုနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရေအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း 20 အကြာပါပြီမယ်ဆိုရင်ငါတွေးမိ။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီ vs. မုဒိန်းသမား
ဒါဟာအထင်ရှားဆုံးသောဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်မုဒိန်းသမားများအတွက်နံပါတ်များကိုပါပဲ။ "အဓမ္မပြုကျင့်" နှင့် "ဘုရားမဲ့ဝါဒီ" အတှကျနံပါတ်များကိုများသောအားဖြင့်ဒီစစ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုအတွက်ညီမျှသောအဖြစ်ပေးအပ်, သို့သော်ဤအကြောင်းမှာအမှား၏အနားသတ်သာဖြစ်ပါသည်နေကြသည်နှစ်ခုအကြားထပ်နေသည်ကိုတွေအများကြီးဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်မုဒိန်းသမားနှစ်ဦးစလုံးအမေရိကနှင့်ကနေဒါနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အရေအတွက်အတော်လေးနည်းကြ၏။ သငျသညျလမျးပျေါမှာကြုံတွေ့ရမဆိုကျပန်းလူတစ်ဦး, သူတို့ဘုရားမဲ့ဝါဒီသို့မဟုတ်အဓမ္မပြုကျင့်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုတော်တော်နိမ့်ပါ၏ သူတို့တစ်တွေဆရာသို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်နှင့်တစ်ဦးဘုရားမဲ့ဝါဒီသို့မဟုတ်အဓမ္မပြုကျင့်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုဝေးအောက်ပိုင်းရှိလိမ့်မည်။ ဤလူမျိုးကိုတစ်ခုခုမြင်သောဆိုလိုတယ် ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်ခြင်းအတွက်မွေးရာပါ နှင့်သိက္ခာမဲ့အပြုအမူရှင်းပြဖို့လိုအပ် attribute တွေဖြည့်စွက်သည့်အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပါတယ်။
ဘုရားသခင့ & ငျြ့တရား
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သုတေသီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့ဘုရားမဲ့ဝါဒီဆရာမှသိက္ခာမဲ့အပြုအမူ attribute လိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းလူတစ်ဦးမျှသာဘုရားတည်ရှိကြောင်းယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်ပေသောအခါအဝေးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အရာဘုရားရှိကယုံကြည်သည်တွေ့ရှိခဲ့ လူရဲ့အပြုအမူစောင့်ကြည့် ။ ထိုသို့ဘုရားမဲ့ဝါဒီနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းမယုံကြည်မှု, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲစာရိတ္တဆီသို့ ပို. အခြေခံကျသောသဘောထားကိုထုတ်လုပ်ရိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ကကျယ်ပြန့်ကပိုဘုရားမဲ့ဝါဒီပိုပြီးဖြစ်လာအဖြစ်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ၏ယုံကြည်မှု drop သင့်ကြောင်းထင်ခဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးပါတယ် ဘုရားမဲ့ဝါဒီအဖြစ်အများပြည်သူမြင်နိုင်နှင့်တက်ကြွသော ။ အဲဒီမှာနေဆဲကြောင်းချဉ်းကပ်မှုတချို့အမှန်တရားဖြစ်မည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါကလည်းလူတိုင်းရဲ့အပြုအမူစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘုရားကငျြ့တရားအဘို့အရေးကြီးသည်ထင်သူ theists မှကြွလာသောအခါလူဦးမယ်လို့မျှော်လင့်သလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီ, မည်သည့်ဘုရားကသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ကြောင်းအများကြီးလျော့နည်းတဲ့ဘုရားမယုံကတည်းကထိုယုံကြည်ချက်ကငျြ့တရားအဘို့လိုအပ်ထင်သူတစ်ဦးဘုရားမဲ့ဝါဒီယုံကြည်စိတ်ချဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားများနှင့်အထူးသဖြင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီအပြုအမူ - - မှာအကောင်းဆုံး, ဘုရားမဲ့ဝါဒီထိတွေ့တိုးလာသူတို့ကိုကြောင်းယူဆချက်မေးခွန်းထုတ်စေပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး, ငါသည်ဤယုံကြည်ချက်လုံးဝစွန့်ပစ်ခံရဖို့အဘို့အကြောင်းလုံလောက်သောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သံသယ။
မုဒိန်းသမားအဖြစ် distrusted အဖြစ်အကောင်းဆုံးမှာဘုရားမဲ့ဝါဒီများမှာ; အဆိုးဆုံးမှာဘုရားမဲ့ဝါဒီမုဒိန်းမှုကျူးလွန်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၌ဤကဲ့သို့သောဘာမှကြုံတွေ့ကြသနည်း သငျသညျအစဉျအမွဲအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးအဓမ္မပြုကျင့်တူသောရာဇဝတ်မှုအချို့ကိုမျိုးဖြစ်ရပြီအံ့သောငှါသငျသညျသကဲ့သို့ယုံကြည်ထားသည်ဟုအထူးသဖြင့်အားရစရာအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်သို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်တွေကို theists ခဲ့ဖူးပါသလော ဒါမှမဟုတ်ခရစ်ယာန်တွေကိုတစ်ဦး, ကိုယ်ကျင့်တရားကျင့်ဝတ်များနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချသူတစ်ဦးအဖြစ်သငျသညျဆကျဆံဖို့တော်မှာပြီလော
အမရေိခရစ်ယာန်တစ်ဦး Nation - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရစ်ယာန်တစ်ဦး Nation လား?
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် Arguments အတွက်ပိုလျှံ Verbiage
Huehueteotl, Aztec ဘာသာရေး, ဒဏ်ဍာရီထဲမှာအသက်တာ၏ဘုရားသခငျသညျ
'' The Dark Knight ဟာ '' အကြောင်းစာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာခရစ္စတိုဖာ Nolan ဆွေးနွေးပွဲ
Kami က The ရှင်တိုဝိညာဉ်သို့မဟုတ်ဘုရားကိုနားလည်ခြင်း
Tito Ortiz ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ကိုယ်ရေးဖိုင်
မီးတောင်ကျောက် (Extrusive များမှာမီးသင့်ကျောက်) အကြောင်းလေ့လာပါ
SAT ခေတ်သစ်ဟီဘရူး SAT ဘာသာရပ်စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
ဗိုက်ကင်းသမိုင်း - ရှေးဟောငျးအီစကင်ဒီနေး Raiders မှ Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
တက္ကသိုလ်, La Verne ၏အဆင့်လက်ခံရေး
လင်ကွန်း, မက်ဆာချူးဆက်အတွက် Walter ဟာအာခီတက်အိမ်